Ahoana ny fanombanana ny tolotra SEO?
Andeha hanomboka ny fikarohana ny orinasam-pandraharahana SEO indrindra. Mazàna, ny ampahatelon'ny fampielezan-kevitra amin'ny Internet dia mihoatra noho ny fanakianana. Ohatrinona ianao vonona ny hamatsy vola amin'ny teti-bola momba ny varotra? Satria maro loatra ireo sampan-tserasera nomerika izay manolotra ny tolotr'izy ireo manerana ny tranonkala ary ny foto-kevitra dia misy. Na dia mbola eo an-dalan'ny fanapahan-kevitra mety aza ianao mandany herinandro (na volana maromaro) amin'ny famoahana antso an-telefaona, na resaka fifampiresahana an-telefaona, ny mpifaninana aminao dia handroso, sy amin'ny. Noho izany, hevitra tsara ny maka serivisy orinasa SEO haingana araka izay tratra - cute summer beach hats. Ny vidiny, anefa, dia tokony ho ampy ara-dalàna, tsy handrava ara-dalàna ny teti-bola ara-barotra amin'ny vanim-potoana fanombohana.
Ankehitriny dia hanandrana ny hahita ilay olana amin'ny fomba fijerin'ny motera fikarohana isika, izay ilaina mba hahalalan'izy ireo ny safidiny sy ny fitondrantenany rehefa mamaly soa ny vohikala amin'ny latsabato ambony. Voalohany indrindra, andeha isika hiezaka hanontany tena ireo fanontaniana sasantsasany:
Inona no andrasanao amin'ny fananana serivisy SEO?
Mihevitra ny SEO toy ny olon-drehetra ve ianao?
Angamba ny sampan-draharaha momba ny varotra ataonao fotsiny dia manizingizina ny hampihatra izany?
Na azonao antoka ve ny momba izany, tanjona amin'ny fampiakarana ny votoatin'ny tranonkalanao sy ny famoahana ny fidiram-bola miditra amin'ny fotoana maharitra?
Andeha isika hitondra fampitahana tsotra: ny fampiasana ny orinasa SEO dia sahala amin'ny fividianana fiara. Eny, raha ny marina, ny safidinao dia miankina amin'ny zavatra ilainao, mifandraika amin'ny tomban'ezaka amin'ny vidiny rehetra momba ny fahamendrehana sy ny tsy fahampiana amin'ny teti-bola ara-barotra amin'izao fotoana izao. Ny tetikady SEO tsara indrindra dia manomboka amin'ny famaritana ny tanjonao maneran-tany sy ny zavatra ilain'ny mpanjifa mety aminao. Manomboka amin'ny mifanohitra amin'izay, ny fikarakarana fikarakarana fikarohana mora vidy dia matetika toy ny fifanarahana fifanakalozana. Eny, afaka miezaka manangom-bola ianao. Na izany aza dia tsy hitondra anao betsaka koa izy ireo.
Etsy andaniny koa, tsy misy fitsipika tokana raha ny fisafidianana ny fonosana amin'ny serivisy SEO. Ny soso-kevitra manan-danja indrindra dia ny SEO dia tsy mikasika ny fametrahana zavatra na ny fitondrana azy ireo fotsiny. Ny fandinihana azy io ho fanafoanana haingana mba hitondra ny fivarotana sy ny fifamoivoizana amin'ny fiainana dia ny fomba fanao ratsy. Raha manao izany ianao, dia ho faty fotsiny ny fandaniana ny volanao. Ny zavatra dia ny hoe SEO iray mahomby dia tsy maintsy manome anao ROI mety: tsy ny hahazoana tsaratsara kokoa ny SERP ary ny fandatsahana ny fifamoivoizana bebe kokoa. Raha ny tena marina, ny tanjona faratampony dia ny manova ny mpanjifa mbola tsy voavolavolavolaina ho toy ny drafitra goavana amin'ny fandoavana mpanjifa.
Noho izany, amin'ny fomba ahoana no ahafahanao manatsara ny orinasa miaraka amin'ny orinasa SEO ny kalitao avo lenta?
Voalohany indrindra, tokony hanampy anao hifantoka amin'ireo tanjona manan-danja sy ilaina ary olana amin'ny mpanjifa mety aminao;
Diagnose ny vokatra tena mahazatra azon'ny mpijery avy amin'ny tranonkalan'ny orinasa;
Hanampy anao hamantatra sy hanatsara ny mari-pamantarana misy anao;
Mamelatra anao ny sehatry ny tombombarotra amin'ny indostria ny orinasa noraisinao;
Mandray ny traikefan'ny mpitsidika tsirairay araka izay tratrany, hanova azy ireo ho an'ny mpividy.
Noho izany, ny saran'ny serivisy SEO dia milefitra amin'ny vokatra marim-pototra tianao haleha, ny kalitaony, ary ny fotoana maharitra. Raha ny fahitana dia ny fifanarahana mora dia midika fotsiny hoe fandrosoana fotsiny. Tadidio fa ny vola laninao dia tsy izay vidinao. Ny ROI anao manokana dia mamaritra ny SEO. Tsy misy fisalasalana, manana 5, 10, na avo 20 isan-jato ny vola miditra amin'ny vola miditra amin'ny vola laninao dia antony tsara tokony holazaina: tsy nitondra na inona na inona mihitsy ianao!